Zvigadzirwa zvekudyara uye mazano | Ehupfumi Zvemari
Zvigadzirwa zvekudyara uye mazano
Chimwe chezvigadzirwa zvinotengeswa nenhamba yakachengetedzeka uye makambani emusika wemasheya maakaundi emari anoitirwa vatyairi vanoisa mari kwazvo muhomwe yemari uye havadi chaiwo-nguva makotesheni kumusika wekutengesa. Iyo inokutendera iwe kuti uise mari murudzi urwu rwechigadzirwa kuburikidza nesarudzo yakasarudzika yemaneja epasi rose maneja, pamusoro pekushanda pamusika weSpanish wemusika uye nemisangano mikuru yepasi rese yemabhizimusi.
Pakati pezvakanaka zvikuru zvekuhaya imwe yeaya maakaunzi mukana wekutambira mashumo emwedzi pamaneja emari yako yakagadzirirwa nemaneja iye, chirongwa chemahara chekuchengetedzwa kwekuchengetedzeka, mukana wekuongorora kwakakosha uye yemahara yekuchengetwa kwenguva yakatarwa yevatengi vatsva. Iyo ndeimwe yemamodheru anga achisimuka nehukuru hwakanyanya mumwedzi ichangopfuura kuti zvinhu zvehuwandu hwehuwandu hwevashandisi vebhangi vabatsire.
Kunyanya vatyairi vanoita mabasa mazhinji pagore, zvese zvakanangwa kupfupi uye munguva yepakati kana yakareba, Inogona kubatsirwa kubva kumafuleti epamusika emitengo ayo ari kutanga kutengeswa nemamwe masangano emari uye, ayo anotendera kuchengetedza kwakakura maererano nemakomisheni emabasa akaitwa. Chiyero chayo chiri pakati pe6 ne10 euros pamwedzi, uye kumunhu anoita zviitiko zvina zvepamwedzi, semuenzaniso, iyo yekuchengetedza inogona kureva angangoita makumi matatu euros pamwedzi paavhareji, iyo inobatsirawo kugadzirisa mari.
1 Zvigadzirwa zvekutengesa pamusika wemusika
2 Tora mukana wekucheka
3 Kutiza hunhu hwekufungidzira
4 Tsvaga yakavimbika masisitimu
5 Zano pamusika wemari
Zvigadzirwa zvekutengesa pamusika wemusika
La chiyero chakadzika Mumusika wemasheya, inobvumidza mushandisi kuita akawanda mabasa ekutenga nekutengesa sezvavanoda, sezvazviri nharembozha kana internet mitengo. Kunyangwe iko kushanda kwayo kusiri kwakapararira kwazvo mubazi rezvemari, inonyanya kufukidza mabhangi nemabhangi ekuchengetedza anoshanda kuburikidza neInternet uye nevaichinja, zvese zvepasirese uye zvepasi rese, zvinova izvo zvinopa mamiriro akanakisa.
Mukukwira kumusoro, mutemo wakajairika pakati pevamwe vane ruzivo vane mari ndeyekumirira kucheka mumitengo yemakambani kupinda mumusika. pamitengo yemakwikwi uye, izvo zvinogona kutungamira kurwendo rukuru rwekumusoro mukukosha uye, nekudaro, mikana mikuru yekuongorora. Izvi zvakatemwa zvakatemwa zvinoitika kana paine imwe "kuneta" munzvimbo dzekutenga nekutengesa zvinotanga kuyangarara, ndiko kuti, apo musika wakanyanyisa uye unoda kugadziriswa mumitengo kuti uenderere mberi nekukwira kwayo kumusoro.
Tora mukana wekucheka
Aya "mabhureki" mumutengo wemutengo wako, mauri kutengesa kunotanga kubuda, inoitika kakati wandei panguva yekusimudzira, kunyangwe vaongorori vemusika wemasheya vanozvitsanangura se "kufamba kwakakwana kwemusika”Izvo zvinoshandira indices, zvikamu kana masheya kuti vawane simba rakawanda muzvikamu zvinotevera zvekutengesa. Ivo vanonyanya kukodzera kune avo varairidzi vari kunanga kwenguva ipfupi uye vanoda kutora yavo yese "muto" kubva kumusoro kumusoro mafambiro anowanikwa neyakaenzana. Pane kudaro, ivo vane mashoma mashandiro kune avo vanosarudza mari yavo kuenda kune yepakati nepakati yakareba sezvo kwavo kukanganisika kusingazobudirire.
Ruzhinji rwevamiriri vezvemari, kure nekubheja pane zvimiro zvakasara zvakanyanya kubva gore rapfuura, zvakajeka kubheja kungwara uye kusarudza kukurudzira kune vatengi vavo kuti ramba uri mumari mukati mehafu yekutanga yegore kuitira kuti uone kuti equities inochinja sei kune akawanda asingazivikanwe anounzwa nemamiriro ezvinhu ehupfumi azvino. Nekudaro, ivo havasi kutsigira kutenga mukati mehafu yekutanga yegore, uye, hongu, kana shanduko munguva ino yaongororwa, zvinzvimbo zvinogona kutorwa mune iwo masevhisi kana makambani ari nani kupindura kunguva iripo, kunyangwe ivo vachinyevera kuti kiyi yekuita mashandiro akanaka ndeyekunyanya kusarudza paunenge uchigadzika portfolio yekuchengetedza.
Kutiza hunhu hwekufungidzira
Vanoongorora zvemusika wemasheya vanofunga kuti zvakakosha kuti titize hunhu hwekufungidzira husina tarisiro yekukura kana kubva kumakambani ari kuzobuda mumatambudziko ezveupfumi akawedzera. Muchidimbu, kungwara uye kumirira semari inozozvibata mumwedzi iyi, kuyedza kutsvaga mukana unonakidza wekutenga kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati.
Dzimwe dzemaitiro ekuzviisa pasi uye, mune dzakawanda zviitiko zvisina musoro (asi dzinoshanda nenzira imwechete) ndidzo dzinokurudzira kutenga nekutengesa zvinoenderana nezuva, mwedzi kana nguva yegore uye, anotevera:
Zuva remwedzi: mitengo yemazita inowanzokwira mazuva ekutanga emwedzi wega wega. Nekudaro, kana ikatengwa muvhiki yekupedzisira yemwedzi wapfuura uye yotengeswa muvhiki rekutanga remwedzi unotevera, muzvinashawo ane mikana yakawanda yekuita purofiti pane yaanodyara munguva pfupi uye, nenzira yakapusa. kuita tsika.
Mazuva evhiki: Chipiri, Chitatu neChishanu zvinowanzo gadzikana, pasina kuchinja kukuru, nepo Muvhuro uine yakajeka bearish neChishanu, inowedzera. Mune yekutanga nekuti iwe wakamirira kuti ichavhurika sei Wall Street uye, zuva rekupedzisira remusangano wekutengesa, nekuti panogara paine mafambiro pane chikamu che nevaichinja pamberi pevhiki.
January: Kune vaongorori vazhinji, mwedzi wekutanga wegore unoratidza zvinozoitika mukati megore rose. Muchokwadi, ivo vanofunga kuti zvinoitika zvemisika mumazuva mashanu ekutanga emwedzi uno zvinogona kuwedzeredzwa kusvika kupera kwegore. Mumazuva iwayo, musika wemasheya unowanzo kuve wakasimba kupfuura wekumusoro, nekuti mamaneja emari, vanova ndivo vanoita kuti misika ifambe, vanodyara mari zhinji yavanenge vawana, nekuti, sezvavari pakutanga kwegore. , kana vakanganisa vanopa nguva yekugadzirisa.
Tsvaga yakavimbika masisitimu
Chinhu chekutanga chinofanirwa kuiswa nemusimari ndechekuti ino sisitimu haina kuvimbika uye inokurudzirwa kuvimba nekuita mari yekudyara nekuda kweiyo kuomarara kudiki kune vatori vechikamu munharaunda ino ine ruzivo. Sei, dai vaive zvechokwadi, kugona kwevaSamaria kupi kupa ruzivo rwakakoshesesa kune vamwe vese vatori vechikamu? Asi chakanyanya kuipa ingozi iyo mamwe emafungiro aya anokwanisa kuunza kune avo vatori vechikamu mumusangano, uye avo, vachitungamirwa nekuda kwavo kwakanaka kana kusaziva, vanogona kufurirwa mukuita kwavo sarudzo.
Naizvozvo, kungwarira kwakawanda uye kungwarira paunenge uchiongorora chishandiso ichi chiripo pamambure, sezvo zvingave zvinonakidza kushanyira nekutora chikamu mazviri, asi kana zvasvika pamari yedu, izvo vatyairi vadiki vanofanirwa kuita kuti vapinde mumaoko. zvechokwadi nyanzvi dzekutsinhana kwemasheya izvo zvinoraira izvo zvinofanirwa kana kusingafanirwe kuitwa nguva dzese. Kune mamwezve makwara enzira anogona kubatsira muzvinashawo kuti aite izvi uye izvo hapana zvimwe kunze kweizvo zvinopihwa nevezvenhau vane hunyanzvi, izvo zvinosanganisira tekinoroji uye kuongorora kwakakosha, kurudziro yeakanyanya kukosha nevaichinja, zvese zvepasirese nepasirese, nhau dzakasimbiswa uye zviitiko zvakakosha zvinoenderana nekuchengetedzwa kwakanyorwa pamusika wemasheya.
Zano pamusika wemari
Iwo musika wekutengesa masevhisi anowanikwa kumasangano emari zvakare ane chimiro cheiyo Investment chipangamazano izvo zvinoita kuti sevhisi yakasarudzika iwanikwe kune vatengi vavo iyo imwe nzira yekudyara inopihwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi mumwe nemumwe uye nehunhu hwavo hwenjodzi seanodyara mari.
Kune rimwe divi, kana izvo zvauri kuda kuendesa manejimendi ekudyara, mamwe masisitimu anewo zvibvumirano zvekutarisira, akatumirwa mafotiforo emari yekudyara, masheya kana zvirongwa zvepenjeni / EPSV, yakachinjirwa kune chimiro chemumwe mutengi uye, uko pamusika wemasheya nyanzvi dzinoshingairira kubata portfolio vachitarisa nguva dzese yakanakisa kudzoka / njodzi chiyero. Chekupedzisira, rimwe basa iro vatengi vanogona kunakidzwa naro kubhangi kana kubhengi rekuchengetedza kuzviongorora, vachizviongorora uye zvakadzama zvigadzirwa zvekudyara izvo zvavakatotenga kare.
Kana zvasvika pakuverenga huwandu hunokwanisika hwega hwega hwekutsinhana kwemasheya, kwete chete isu tinofanirwa kutsvaga mutsauko uripakati pemutengo wekutenga nemutengo wekutengesa, asi isu tinofanirwa zvakare kuwedzera iyo komisheni mitengo iyo yega yekutengesa masheya ine, pamwe ne iyo yekuchengetwa uye, chokwadika, iyo huwandu hwakatemerwa kuHaimari, ne18%. Kuwedzera ese - anomiririra pakati pe 0,50% uye 1,50% yemari yakachengetwa- zvinokwanisika kuona mhindu yechokwadi yekudyara, iyo mune zviitiko apo mari inowanikwa zvishoma, isingatomboite mhedzisiro. Yemakomisheni uye mitero. Mune yepamusoro mamiriro ezvinhu, chinhu chinonzwisisika kuita kubata mari kusvikira zvirinani mitengo yawanikwa mukotesheni yayo kana kudzamara zviratidzo zvaratidza kupera kwesangano iri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvigadzirwa zvekudyara uye mazano
Chii chatingaite nemari yedu yatakachengeta zhizha rino?
Masekete nemitengo zvakabatsirwa nekukuvadzwa nehurumende nyowani